Izimfihlo Zokubhuloga Indlela Yakho Yokuthola Imali Eyizilinganiso Eziyisithupha
Njengoba sengiqale eyami incwadi esikhathini esithile esidlule, ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukugcina ibhulogi futhi ngihlela konke engikufundile mayelana nokubhuloga nemithombo yezokuxhumana kube yincwadi eyodwa ehambisanayo.
Kubonakala lokho UDarren Rowse weProblogger ukwenzile lokho nokho. Ngibuke ibhulogi kaDarren isuka futhi ungabona ukuphikelela nokucaca kombono uDarren abe nawo waba ngumthombo omuhle wama-blogger. I-Problogger nakanjani kuhlu lwami lokuphakelayo 'okumele kufundwe' futhi alunakho konke ukuzijabulisa nokuziqhayisa UShoemoney futhi UJohn Chow (uthando olukhulu kulabo bafana, noma ngabe ... ngifunde amabhulogi abo, nami!).
Nakhu ukubuka konke kwencwadi evela ku-Amazon:
Ukubhuloga sekuyinto yokuchitha isizungu ethandwayo nehehayo kwabaningi, kepha ama-blogger ayanda ayathola ukuthi angaba ngumthombo omuhle kakhulu wemali eqondile noma engaqondile. Yize izithiyo zokuqala ibhulogi ziphansi, ngaphandle kokuqondiswa ngochwepheshe kulula ukukhungatheka lapho impumelelo ingahambisani nokulindelwe. Kubhalwe ngumsunguli wensiza engu- # 1 yokwenza imali ngamabhulogi, iProBlogger ithatha isifundi kusuka ekuqaleni ngokuphelele ukuthola imali noma ngenxa yokubhuloga. Ngezifundo ezisebenzayo ngesinyathelo ngesinyathelo umfundi uzokhetha isihloko sebhulogi, ahlaziye imakethe, asethe ibhulogi, ayikhuthaze futhi athole imali.
Sihalalisela uDarren noChris ngalokhu isahluko esisha emlandweni kaProblogger! Kuluhlu lwami Wish!
Tags: ibhukuudarren rowseproblogger
I-Eventbrite: Imicimbi Yenziwe Kalula Ngempela
Ngo-Apr 8, i-2008 ku-10: 41 AM
UDouglas, ngiyabonga kakhulu ngokusho incwadi yeProBlogger. Bekumnandi impela ukusebenza noDarren noChris, futhi manje njengoba incwadi isendleleni izinto ziya zijabulisa ngempela.
Ngakho-ke, ubhala hlobo luni lwencwadi?
UJohn Wiley & Amadodana
Ngo-Apr 8, i-2008 ku-10: 58 AM
Ngithole incwadi enamakhasi angaba ngu-40-50 eqale ngokuthi ungayisebenzisa kanjani ibhulogi usebenzisa izindlela ezinhle kakhulu zokubekwa kwezinjini zokusesha, ukufundeka, namasu. Angikayithinti isikhashana ukwethembeka!
Ngo-Apr 8, i-2008 ku-4: i-02 PM
ngiyabonga ngokushiwo kukaDouglas - kwazise.
Ngo-Apr 10, i-2008 ku-8: 26 AM
Uyabheja, Darren! Siyakuhalalisela ngempumelelo yakho oyizuze kahle!